Liersmụ aka na akpụkpọ ụkwụ Ndị na-ebu ngwaahịa na ụlọ ọrụ - China Ọhụrụ tmụaka mittens & akpụkpọ ụkwụ Manufacturers
Iesmụ ọhụrụ Lambskin Sock Booties / akpụkpọ ụkwụ
Ejiri naanị akpụkpọ anụ atụrụ nke Australia, dị mma, dị oke ma na-adịgide adịgide. Nnukwu maka idebe obere ụkwụ na-ekpo ọkụ ma dịkwa mma, nke ejiri akwa a kpara iji jide booties n'ụzọ dị mma na obere ụkwụ ndị ahụ na-adịghị mma .. Ezigbo iji kpoo ma zụọ ụmụaka dị oke ọnụ ahịa. Nkeji edemede no: BS-003 ● Na-emeghe site na ejiri akpa aka ● Durable roba outsole ● Agba: uhie, beige, pink, acha anụnụ anụnụ na agba ndị ọzọ. Nha: nha eserese
/Mụaka / Childrenmụaka Na-amụ ije atụrụ na atụrụ / lambskin Booties / akpụkpọ ụkwụ
Ejiri naanị akpụkpọ anụ atụrụ nke Australia, nke na-enye nkasi obi, na-azụlite ma na-ekpo ọkụ Ihe mkpuchi taabụ dị mfe idozi site na obere mkpịsị aka. Egwuregwu EVA na-agba agba bụ ìhè ma na-agbanwe agbanwe. Zuru oke maka ịgbagharị n'ogige ahụ, ịrị ugwu na osimiri ma ọ bụ na-agbagharị gburugburu obodo ● Nkeji edemede: BS-002 ● Na-ebilite ma jikọtara ya na velcro ● Dọpụ roba na-apụ apụ ● naanị EVA , isi awọ na agba ndị ọzọ. Nha: nha eserese
Baby Full Sheepkin Booties / akpụkpọ ụkwụ na Velcro
Ejiri naanị akpụkpọ anụ atụrụ nke Australia, Cozy, thick and durable. Ọmarịcha iji mee ka obere ụkwụ dị ọkụ ma nwee ntụsara ahụ, nke e mere na velcro na-eme ka ọ dịrị ha mfe itinye ma na-aga ụkwụ na-adịghị mma. -001 • Mepee ma jigide ya na velcro • inogide rosa outsole • Agba: oji, aja aja, kamel, pink, isi awọ na agba ndi ozo. • Nha: nha eserese
/mụaka / ụmụaka na-akpacha ajị atụrụ
Emere nke ọma ma dezie ya, Mee ka lambskin kachasị dị nro, jiri obi ụtọ mara mma ma nwee ntutu isi, ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ nke ọma ka ndị mittens a zuru oke n'afọ niile. zuru oke maka iji ihu igwe na oyi eme ihe kwa ụbọchị. Nkeji edemede no: KM-002 ● 100% Ezigbo Shearling ● Cross aka stitchings ● Agba: mbuaha agba ● Hichapụ dị ọcha ● nha eserese
Iesmụ ọhụrụ / ụmụaka na-adụ atụrụ mittens
Emere nke ọma ma dezie ya, Mee ka lambskin kachasị dị nro, jiri obi ụtọ mara mma ma nwee ntutu isi, ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ nke ọma ka ndị mittens a zuru oke n'afọ niile. zuru oke maka iji ihu igwe na oyi eme ihe kwa ụbọchị. • Nkeji edemede mba: KM-001 • 100% ezigbo lambskin • Njirimara a ogologo eriri jikọọ abụọ mitten • Agba: mbuaha agba • Hichapụ ọcha • nha eserese